Twitch – Page2– Gaming Noodle
[Unicode] Streamer တှအေတှကျ Facebook Gaming ဟာ Twitch နဲ့ Youtube ထကျ ဘာလို့ ပိုကျဆံပိုရှာနိုငျတာလဲ? ဗီဒီယိုဂိမျးဈေးကှကျတနျဖိုးဟာ ကနျဒျေါလာ ၁၂၀ ဘီလီယံအထိရှိခဲ့ကွောငျး ပွီးခဲ့တဲ့နှဈက စဈတမျးမြားမှာ ဖျောပွထားခဲ့ကွပါတယျ။ ဒီဈေးကှကျတနျဖိုးကို ရရှိတာဟာ ဗီဒီယိုဂိမျးမဟုတျပဲ နိုငျငံတဈနိုငျငံသာ ဖွဈခဲ့မယျဆိုရငျ ကမ်ဘာ့ထိပျဆုံး GDP ရရှိတဲ့နိုငျငံ ၁၀၀ စာရငျးမှာ ပါဝငျနမှောဖွဈပါတယျ။ ဒီဈေးကှကျတနျဖိုးဟာ အရငျလို ဂိမျးကစားသူတှကေ ဂိမျးကို ဝယျယူကစားရုံသကျသကျကွောငျ့ ဖွဈပျေါလာတာ မဟုတျတော့ပါဘူး။ Streaming platform မြားပျေါက အလှနျမြားပွားလာတဲ့ ဂိမျးကွညျ့ရှုသူမြားဟာ streamer မြားကို လှူတနျးနကွေတဲ့ ငှကွေေးတနျဖိုးမြားလညျး ပါဝငျပါတယျ။ ထိပျဆုံးနရောမှာ ရပျတညျနတေဲ့ ဂိမျး streaming platform တှကေတော့ …
Streamer တှအေတှကျ Facebook Gaming ဟာ Twitch နဲ့ Youtube ထကျ ဘာလို့ ပိုကျဆံပိုရှာနိုငျတာလဲ? Read More »
Street Fighter cosplay ဝတ်ခဲ့မိလို့ Twitch ကနေ ban ခံခဲ့ရတဲ့ အမျိုးသမီး streamer
[Zawgyi] Street Fighter cosplay ဝတ်ခဲ့မိလို့ Twitch ကနေ ban ခံခဲ့ရတဲ့ အမျိုးသမီး streamer အမျိုးသမီး streamer တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ Quqco ဟာ cosplay ဝတ်စုံတစ်ခုကို ဝတ်ဆင်ပြီး stream လွှင့်ခဲ့တဲ့အတွက် Twitch ကနေ သုံးရက်ခန့် suspend လုပ်ခြင်းကို ခံခဲ့ရပါတယ်။ သူမဝတ်ဆင်ခဲ့တာကတော့ Street Fighter ထဲက နာမည်ကျော်ဇာတ်ကောင်တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ Chun-Li ပုံစံ cosplay ပါ။ Quqco ဟာ Twitch ပေါ်မှာ သူမ ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ ဂိမ်းဇာတ်ကောင်များရဲ့ ပုံများကို ရေးဆွဲပြလေ့ရှိသူတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ မကြာသေးမီက သူမဟာ Chun-Li ပုံစံဝတ်ဆင်ပြီး stream လွှင့်နေစဉ်မှာပဲ Twitch ကနေ သုံးရက် …
Street Fighter cosplay ဝတ်ခဲ့မိလို့ Twitch ကနေ ban ခံခဲ့ရတဲ့ အမျိုးသမီး streamer Read More »
အဖေ့ဆေးကုစားရိတ်အတွက် တစ်နေ့ ၁၀ နာရီကျော် Live လွှင့် ဂိမ်းဆော့ပြခဲ့တဲ့ Streamer ကလေးငယ်
[Zawgyi] အဖေ့ဆေးကုစားရိတ်အတွက် တစ်နေ့ ၁၀ နာရီကျော် Live လွှင့် ဂိမ်းဆော့ပြခဲ့တဲ့ Streamer ကလေးငယ် ကနေဒါနိုင်ငံသား Streamer တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ “zylTV” ဟာ အစာဟောင်းအိမ် ကင်ဆာ (Rectal Cancer) အဆင့်လေး (အဆိုးရွားဆုံးအဆင့်) အထိဖြစ်နေတဲ့ သူ့အဖေရဲ့ ကုသစားရိတ်တွေအတွက် Twitch မှာ Live Streaming ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ သူဟာ Twitch မှာ တစ်နေ့ကို ဆယ်နာရီခန့်ဖြင့် ၅ ရက်တိတိ Fortnite ဂိမ်းကို live streaming ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး ကြည့်ရှုသူများထံမှ ငွေကြေးအထောက်အပံ့များ ရယူခဲ့ပါတယ်။ zylTV ကတော့ သူ့အဖေဟာ ၂၀၁၈ စက်တင်ဘာလ ကတည်းက အဆင့် ၃ ကင်ဆာဝေဒနာကို ခံစားနေရပြီး တဖြည်းဖြည်းနဲ့ …
အဖေ့ဆေးကုစားရိတ်အတွက် တစ်နေ့ ၁၀ နာရီကျော် Live လွှင့် ဂိမ်းဆော့ပြခဲ့တဲ့ Streamer ကလေးငယ် Read More »